Myanmar Thingyan New Year Holidays Announcement! – Impact Hub Yangon
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအခါသမယ သင်္ကြန်ကာလဖြစ်တဲ့ ဧပြီလ (၉) ရက်နေ့၊ ၂၀၂၂ မှ ဧပြီလ (၁၇) ရက်နေ့၊ ၂၀၂၂ အထိ Impact Hub Yangon ၏ ရုံးနှင့် Co-working Space ရဲ့ နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်များ ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာလိုပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ မေတ္တာတရားများ ပြန့်ပွားပါစေကြောင်းဆုတောင်းနဲ့ အတူ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးအခါသမယကို လုံခြုံစွာနဲ့ချစ်ရတဲ့ မိသားစုများနဲ့ အတူတကွ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေကြောင်း Impact Hub Yangon Team မှဆုတောင်း မေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။
We would like to announce that our office and co-working space will be closed on Myanmar New Year, Thingyan Holidays from9April, 2022 to 17 April 2022.
We wish all of you all haveasafe Thingyan Myanmar New Year with the love ones filled with peace, good health and loving kindness.
Previous Call for Applications: Preparation Program for Exportation and European Market Readiness
Next MeetaMember from Accelerate Regional Membership 2021 Cycle!